Iimpawu zeGeomoments-iimvakalelo kunye nendawo kwindawo enye
Yintoni iGeomoments? Inguqu yesine yezoshishino isizalise ngenkqubela phambili enkulu yezobuchwepheshe kunye nokuhlanganiswa kwezixhobo kunye nezisombululo zokufezekisa indawo eguqukayo kunye ne-intuitive kummi. Siyazi ukuba zonke izixhobo eziphathwayo (iifowuni…
Iidolophu zenkulungwane yama-101: ulwakhiwo lwezibonelelo ezili-XNUMX
Iziseko zophuhliso ziyimfuno eqhelekileyo namhlanje. Sihlala sicinga ngezixeko ezihlakaniphile okanye zedijithali kumxholo wezixeko ezikhulu ezinabemi abaninzi kunye nomsebenzi omningi ohambelana nezixeko ezikhulu. Nangona kunjalo, iindawo ezincinci nazo zifuna iziseko zophuhliso. NONE
I-6 geo-engineering zeprinteli zokukhuphela mahala
Namhlanje siza kukubonisa iincwadi ze-ebooks kunye noshicilelo ukuze uqonde inkqubela phambili yetekhnoloji kwicandelo le-geo-engineering kunye nefuthe layo kubomi bemihla ngemihla. Zonke iinketho simahla kwaye kulula ukuzifumana. Ndijongene nokukhula okumangalisayo kwetekhnoloji ...
GPS / Izixhobo
I-TopView-Isicelo sophando kunye nokuma komhlaba
Yonke imihla sibona ukuba iimfuno zethu ziyatshintsha kwaye ngenxa yezizathu ezahlukeneyo siyanyanzelwa ukuba sifumane iSoftware yePC eyahlukileyo, iGPS, kunye neZitishi zizonke, nganye inenkqubo eyahlukileyo, kunye nesidingo sokufunda kwi…
Google umhlaba / imephu
Landa imephu kwaye uhlele indlela usebenzisa i-BBBike
I-BBBike sisicelo esinjongo yayo ingundoqo ikukubonelela ngomcwangcisi wendlela yokuhamba, usebenzisa ibhayisekile, ukunqumla isixeko kunye neendawo ezisingqongileyo. Sisenza njani isicwangcisi sendlela yethu? Ewe, ukuba singena kwiwebhusayithi yakho, into yokuqala…
Itekhnoloji ye-Geospatial, indima yayo kunye nokubaluleka kwayo kubume be-IT kumaSebe ezoThutho.
itekhnoloji ye-geospatial. Icatshangelwe njengabo bonke ubuchwepheshe obusetyenziselwa ukufumana, ukulawula, ukuhlalutya, ukubona kunye nokusabalalisa zombini idatha kunye nolwazi olunxulumene nendawo yento, iye yadlula ingcamango yayo yokuqala ye-triad eyenziwe ngokubalulekileyo ye-GIS, i-GPS ...
Xa sifunda iithiyori ezahlukeneyo ezixhasa unxibelelwano olubandakanya i-cartography, zombini njengenzululwazi ukumela i-geographic phenomena, kwaye njengobugcisa bokunika olu lwazi i-aesthetics efunekayo, siyaqonda ukuba ixesha esiphila kulo ...
Icandelo lokuThelekisa iMveliso
I-Geo-matching igxininisa lonke ixabiso lokuphononongwa kwe-GIM International kunye neemveliso zeHydro International kwindawo enye. I-Geo-matching.com yiwebhusayithi yokuthelekisa imveliso ezimeleyo yee-hardware kunye neengcali zesoftware kwicandelo le…
Fumana ukuchaneka kwe-submeter kwi-iPad / kwi-iPhone
Umamkeli weGPS wesixhobo se-iOS, esifana ne-iPad okanye i-iPhone, ufumana izichaneke ngokulandelelana kwawo nawuphi na omnye umhambisi: phakathi kwe-2 kunye ne-3 yeemitha. Ngaphandle kweKit yeGIS, siye sabona amanye ambalwa amathuba okuphucula ukuchaneka kwayo, nangona kunjalo…
Drones ukusetyenziswa emkhosini Professional, photogrammetry kwimizuzu.
Ukwazi ukuba zisebenza njani iiyunithi ezizimeleyo namhlanje kusinika ulwaneliseko lokwazi imvelaphi yezinto kodwa sikwathatha ithuba lenkqubela phambili entsha. Yenzeka kuthi thina bebezazi iindlela zemveli zefotogrammetry, kunye nobubi babo…
I-GIS Pro I-GIS yesicelo esihle kwi-iPad?
Kwiveki ephelileyo bendithetha nomhlobo waseKhanada obendixelela ngamava abawafumeneyo besebenzisa iGIS Pro kwiinkqubo zovavanyo lwecadastral. Siphantse safikelela kwisigqibo sokuba nangona zikho ezinye izixhobo, zivela kwinto…
OkMap, efanelekileyo ekudaleni nasekuhleleni imephu yeGPS. MAHHALA
I-OkMap mhlawumbi yenye yezona nkqubo ziyomeleleyo zokwakha, ukuhlela kunye nokulawula iimephu zeGPS. Kwaye olona phawu lwayo lubalulekileyo: Isimahla. Sonke sizibonele ngaxa lithile kwimfuno yokumisela imephu, i-georeference a…
Thelekisa iGPS -Leica, Magellan, Trimble kunye neTopcon
Kuqhelekile, xa kuthengwa izixhobo ze-topography, kuyafuneka ukuba wenze uthelekiso lwe-GPS, izikhululo ezipheleleyo, isoftware, njl. I-Geo-matching.com yenzelwe loo nto kanye. I-Geo-matching yindawo yeGeomares, inkampani enye…
I-Topographic Engineering ekuphuhlisweni kwamazwe aseMerika
Eli ligama leNkongolo yokuQala ye-Ibero-American yeTopographical, Geodetic and Geomatics Engineering eya kuqhubeka eJalisco, eMexico. Lo msitho ukhuthazwa yi-11 ye-Mexican Association of Topographical Engineers, kwaye iya kusuka kwi-16 ukuya kwi-18 ...
I-GPS kwi-Android, i-SuperSurv yindlela ephezulu yeGIS
I-SuperSurv sisixhobo esiphuhliswe ngokukodwa kwi-GPS kwi-Android, njengesicelo esidibanisa imisebenzi ye-GIS apho idatha ingaqokelelwa kwintsimi ngokufanelekileyo nangoqoqosho. IGPS kwi-Android Inguqulelo yamva nje, iSuperSurv 3…
Iimagazini ezi-3 kunye namava ama-5 endawo ye-geomatic
Lixesha lokuba uhlolisise amaphephancwadi anamaphephancwadi akutshanje aphumayo; apha ndinishiyela ubuncinane amava abangel’ umdla aphuma kuhlelo lwakutshanje lwala maphephancwadi. I-Geoinformatics 1. Amava omsebenzisi ekusebenziseni i-software ye-GIS...
Oko sele phezulu Bentley and Trimble?
Oku kujongeka njengengqikelelo yam yoSuku luka-Epreli Fool, kodwa akunjalo. Kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo isivumelwano sentsebenziswano saye sabhengezwa ngokusemthethweni malunga nento esive ngayo emva kweziganeko, kwaye oko kusishiya sicinga ...
Lokuthelekisa itheyibhile kwizikhululo zizonke phantse 50
I-GeoInformatics isimangalise kule nyanga ngohlelo olubonisa izikhululo ezingama-49 ezahlukeneyo kwitafile yokuthelekisa enokuba luncedo kakhulu kwabo bafuna ukwenza isigqibo ngexesha lokuthenga, kunye…